(MK-677 Powder) Talooyin Ibugamoren Isticmaalidda budada AASraw ayaa budo ah
/blog/Ibutamoren , MK-677/(MK-677 Powder) Talooyinka Ibugamoren Isticmaalidda budada
Posted on 01 / 05 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Ibutamoren, MK-677.
(MK-677 Powder) Talooyin Ibugamoren Powder Use Powder
1.What (MK-677 Powder) budada Ibutamoren? 2 (MK-677 Powder) Faa'iidooyinka guud ee Muuska Ibutamoren
3. (MK-677 Powder) Saameynta Saamaxada ee Ibutamoren 4. Maxaa loo dooran karaa budada MK-677?
5..How To Use Ibutamoren 6.Waa maxay Qiyaasta Qaadashada?
7.Waxay tahay sababta loogu talagalay Jimicsiga? 8.MK-677 Faahfaahinta budada:
9.How si aad u qaadato Liquid MK-677 ee budada qashinka ah? 10.Buy Genius MK-677 Powder ka AASraw
1.What's (MK-677 budada) Ibutamoren Powder?
(MK-677 budada) Ibutamoren budada waa daawo hagaajin karta cimri dherer, cufnaanta lafaha, awoodda garashada, xoogga, iyo dheef-shiid kiimikaadka. Waxaa loo baaraa cudurka Alzheimers, jilicsanaanta waayeelka, iyo hormoon la'aanta koritaanka.
MK-677 waxaa sidoo kale loo isticmaalaa cayaaraha si ay u helaan tartan tartan ah ciyaaraha. MK-677 waxay ku xidhan tahay gefelka ghrelin, oo la jaanqaado saameynta ghrelin. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah cunto xumo, murqo-barar, cufanka macdanta lafaha, angiogenesis, VEGF expression, ilaalinta wadnaha, iyo qaabeynta gulukooska iyo tamarta guriga homeostasis.
Ibutamoren waxaa si joogta ah looga wada hadlaa bogaga internetka ee anabolic muruq- guryaha dhismaha. Waxaa laga heli karaa miiska waxaana loo isticmaalaa kuwa doonaya in ay kordhiyaan heerarka hoormoonka koritaanka.
Si kastaba ha ahaatee, daraasaadka kiliinikada ee xaruntan ayaa ah mid aad u yar. Qoraalka hoos ku xusan, waxaanu soo bandhigi doonaa wixii la yaqaan ee ibutamoren ilaa hadda.
Ibutamoren (oo sidoo kale loo yaqaano ibutamoren mesylate ama MK-677), waxay kor u qaadaysaa dheecaanka hoormoonka koritaanka (GH) wuxuuna kordhiyaa saameeynta insulin-kobca sida 1 (IGF-1).
Ibutamoren wuxuu kordhiyaa heerarka hoormoonka koritaanka, isaga oo la jaanqaada ficil-celinta hormoonka hormone, oo ku xiran mid ka mid ah garsoorayaasha ghalelin (GHSR) ee maskaxda. GHSR-ka firfircoon wuxuu kicinayaa hormoonka koritaanka maskaxda.
GHSR waxaa laga helaa gobollada maskaxda kuwaas oo xakameynaya rabitaanka cuntada, raaxada, niyadda, jimicsiga bayoolajiga, xasuusta, iyo garashada. Sidaa darteed, waxaan filan karnaa in ibutamoren ay saameyn karto shaqooyinkan. Hase yeeshee, illaa iyo imtixaanka kiliinikada ayaa qeexaya kaliya saameynta ibutamoren ee rabitaanka cuntada - iyo sida la filayo, sida ghrelin, ibutamoren waxay kordhisaa.
Waxyaabo badan oo ku saabsan ibutamoren waa in ay kordhiso heerarka hormoonka koritaanka iyada oo wax yar ama kor u kaca hormoonnada kale, sida cortisol. Cortisol wuxuu xakameynayaa habka difaaca jirka, wuxuu yareynayaa bogsashada boogta, wuxuuna waxyeelaa barashada iyo xasuusta, waxaana badanaa aan fiicneyn in uu hormoonkan kor u kaco.
2 (MK-677 Powder) Faa'iidooyinka guud ee Muuska Ibutamoren
Faa'idooyinka caafimaadka ee MK-677 waxay u ekaanayaan rajo. Hormar kobcinta ayaa hoos u dhacaya da'da, MK-677 waxay ku cadeeyeen tijaabooyin la tijaabiyey, tijaabooyin xakameynaya xakamaynta si loo baddalo 1.
Tani waa qaabka caadiga ah ee cilmi baarista dheeraadka ah. Sawiraan waxa hormoonnada, neurotransmitters ama calaamadaha kale ee hoos u dhigaya da'da. Marka xigta, fiiri haddii heerarka dib u soo celinta ay sidoo kale ka noqdaan saameynta gabowga.
Markii ugu horeysay ayaan xiiso u qabaa MK-677 maxaa yeelay waxaan baarayay xiriirka u dhexeeya hurdada iyo hormoonka koritaanka.
Kahor intaanan ka hadlin faa'iidooyinka, dhibaatooyinka soo raaca, iyo qiyaasta (MK-677 Powder) Budada Ibutamoren, aan dib u laabanno oo ka wada hadalno hormoonka koritaanka laftiisa.
1) Ibutamoren wuxuu ka caawiyaa dhisidda murqaha
Ibutamoren waxaa badanaa loo isticmaalaa walax anaboleed, si loo kordhiyo tirada jirka ee caanaha ah, taasoo abuuraysa muruqyo waaweyn. Waa hadal firfircoon oo maalinba mar la qaadi karo. Kuwani waa dhammaan waxtarrada marka la barbardhigo kiciyeyaasha hormoonnada koritaanka kale.
Sidii hore loo soo sheegey, ayaa wuxuu kor u qaadayaa heerka hormoonka koritaanka iyo IGF-1. Labada hormoon ee hormoonka ah iyo IGF-1, ayaa sidoo kale kordhiya murqaha, xoogga muruqa, iyo yareynta dufanka jirka.
Dumarka cagaaran ee caafimaad qaba, daaweyn laba-bilood ah oo la socota ibutamoren ayaa kor u kacay tirada caanaha, iyo si xad dhaaf ah kor ugu kacay heerka dheef-shiid kiimikaad (BMR).
2) Ibutamoren wuxuu yareeyaa Muruqa Maskaxda
Cunnada mutadawiciinta ah ee raashinka ah, oo khudbada ka soo horjeeda, waxay khalkhal gelineysaa luminta protein-ka ee laf-dhabarka, taasoo keeni karta murqaha.
Bukaanka waayeelka ah ee jabta jabta, biriijka ayaa kor u qaadey xawaaraha socodka, xoojinta muruqa waxayna hoos u dhigtay tirada fallaadhaha.
3) Ibutamoren wuxuu kordhiyaa Cufnaanta lafta
Hormoonka koritaanka (GH) wuxuu kordhiyaa lafo wareega ugu dambeyntiina cufnaanta lafaha. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah isbeddelka kordhay ee maadooyinka lagu daaweeyo hoormoonka koritaanka, cufnaanta lafaha ayaa marka hore hoos u dhigi karta ka hor intaan la kordhin. Asal ahaan, waxay qaadataa waqti (> 1 sano) si loo arko cufnaanta lafaha.
Goobaha iskaa-wax-u-qabsada ee nafsiga ah ee caafimaad qaba, ayaa waxay kor u qaadeen lafaha lafaha.
Dadka waawayn ee waayeelka ah, ibutamoren ayaa kordhay dhismaha lafaha, sida lagu qiyaaso osteocalcin, calaamad u ah wareega lafta.
Dumarka ka dambeeya menopausal, ibutamoren ayaa kordhay cufnaanta maadada lafaha, taas oo gacan ka geysaneysa kordhinta lafta xoogga iyo ka hortagga osteoporosis.
4) Ibutamoren wuxuu hagaajiyaa Hurdada
Daraasad ayaa muujisay in maaddooyinka yaryar iyo kuwa waayeelka ahba, ay khubaradu kor u qaadeen tayada hurdiga ah iyo REM (dhaqdhaqaaqa dhaqsaha badan ee dhaqdhaqaaqa) ee hurdada.
Marka laga reebo daraasaadka sayniska, waxaa jiray warar badan oo ku saabsan hagaajinta shakhsiyadeed ee tayada hurdiga ah, oo laga helo kulliyado kala duwan.
5) Combats Ibishamoren Aging iyo May Kordhin kara Longevity
Horumarka hormoonka (GH) iyo qanjirada labadaba waxay labaduba hoos udhacayaan bartamaha-bini-aadamka inta lagu jiro nolosha.
Daraasadda dadka waayeelka ah, maalin walbana waxay kordhineysaa heerarka GH iyo IGF-1 ee kuwa qaangaarka ah ee qaangaarka ah oo caafimaad qaba oo aan lahayn waxyeello halis ah. IGF-1 waxaa loo yaqaanaa in ay saameyn ku yeelato mudada dheer.
Daraasad kale, ibutamoren ayaa dib u soo nooleeyay astaanta hormoonka koritaanka ee maadooyinka cayilan.
6) Ibutamoren May Hayso Nootropic Raadka
Dadka qaarkiis waxay isticmaalaan ibutamoren sida buototopic sababta oo ah waxay ku dhaqmaysaa maqaariyaha ghrelin, taas oo leh saameyn aan laheyn. Waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan saameyntaan ku yaal boostada ghrelin. Saynisku, si kastaba ha ahaatee, weli maaha inuu barto sida iyo sida uu ufiiriyuhu u saameeyo waxqabadka garashada.
Laba qaab oo aan toos ahayn oo ay kudhawaaqdo in uu hagaajin karo hawlaha maskaxda:
Ibutamoren wuxuu kordhiyaa IGF-1, taas oo loo yaqaan in lagu hagaajiyo xasuusta iyo barashada.
Ibutamoren ayaa sidoo kale kordhiya muddada hurdo la'aanta REM iyo tayada hurdada. Oo waxaan ognahay in hurdada ay muhiim u tahay shaqada garashada wanaagsan.
Daraasad ayaa su'aal ka keenay iskaashiga IGF-1 iyo Alzheimers oo hoos u dhacda, iyo in ilamamoren ay caawin karto. Si kastaba ha noqotee, daraasaddan, buufisinta waxay ahayd mid aan waxtar lahayn markii la yareeyo horumarka Alzheimers ee bani-aadamka.
7) Ibutamoren waa faa'iido u leedahay daaweynta hormoonka koritaanka hormoonka
Ibutamoren waxay kordhin kartaa hoormoonka koritaanka, IGF-1, iyo IGFBP-3 ee carruurta leh hormoonka koritaanka hormoonka. Waxaa intaa dheer, saameynahan waxaa lagu gaarayaa iyada oo aan wax ka beddelin diiradda prolactin, glucose, triiodotyronine (T3), thyroxine (T4), thyrotropin, cortisol ama insulin.
Nafaqo-xumada daran ee GH-ka, ayaa wuxuu kor u kiciyay IGF-1 iyo hormoonka koritaanka, iyada oo aan wax isbeddel ah ka muuqan cortisol, PRL, iyo heerarka hoormoonka tayroodh. Si kastaba ha ahaatee, insulin iyo glucose ayaa la kordhiyay.
8) Ibutamoren wuxuu kaa caawin karaa bogsashada nabarka iyo dib-u-dhiska
Hormar kobcinta wuxuu kicin karaa nudaha unugyada iyo bogsashada boogta, sidaas darteed ibutamoren ayaa laga yaabaa inay ka caawiso kuwan.
Waxaa jira warbixino shakhsi ah oo ku saabsan khudbada ibutamoren, laakiin cilmi sayniska ayaa ka maqan.
9) Ibutamoren May Waxay Caawin Kartaa Joogtada
Midkani waa mid aan loo baahneyn, laakiin dadku waxay ka waramayaan in ay ku habboon yihiin in ay isdamoren ka shaqeeyaan.
3. (MK-677 Powder) Saameynta Saamaxada ee Ibutamoren
Saameynaha ugu badan ee keena daawada ibutamoren waa kor u kaca cunto-qabatinka iyo ka-gudubka, bararka hoose ee hoose ee bararka iyo murqo xanuun (R).
Daraasado dhowr ah ayaa sheegay in kororka sonkorta dhiigga ee soonka iyo hoos u dhaca dareemeyaasha insulin (R, R).
Dhibaatooyinkani waxay la mid yihiin kuwa lagu arkay dadka qaba hormoonnada hormoonka kor u kaca, badanaa xanuunada wadnaha iyo insulin-ta (R, R).
Inkasta oo cilmi-baarisyada badankood ay yar yahiin ama wax saameyn ah, hal daraasad ayaa la joojiyay sababtoo ah dhacdooyin halis ah. Bukaanada waayeelka ah ee qabta qaliinka, ibutamoren cadaadiska dhiigga oo sareeya, gulukooska dhiigga iyo HbA1c, waxaana jiray xaalado wadno-galin wadnaha ah (R). Bukaannada ay la kulmaan wadnaha wadnaha ee qalalaasuhu waxay ka badnaayeen 80 waxayna qabeen taariikhda wadnihii hore ee wadnaha.
Waxay noqon kartaa mid caqli gal ah in la daawado cunto karbohidratkaaga oo si joogta ah u fiirso heerka sonkorta dhiigga iyo insulin inta aad qaadanayso birutamoren.
Sida a anabolic, waa inaad ka fogaataa haddii aad kansar qabto. Labada hormoon ee koritaanka iyo IGF-1 waxay kor u qaadi karaan kobaca kansarka.
4. Maxaa loo dooran karaa MK-677?
Ibutamoren Powder aka MK-677 Powder waxaa laga iibiyay miiska si ay u noqoto wax soo saarka jidhka, ama kaniiniga cilmi-baadhista waqti go'an. SARMs waa shey weyn oo cusub sidaa daraadeed Mk-677 waa la iibiyay sida, hase yeeshee xaqiiqda maaha SARM. SARMS waa habdhisleyda xakameyn xargaha oo doorata, taas oo ay ficil ahaan si sax ah u sameeyaan steroids; kaliya SARMs waa xulasho iyo bartilmaameed oo keliya oo leh xayiraadaha iyo xayawaanka qaaska ah. Waxyaabaha fiican ee SARMs waa sida qaadashada steroid khafiif ah adoon helin waxyeellooyin (isla markiiba). Saameynaha saameynaha ee SARMs waa mid aan la garanayn, inkastoo ay noqon karaan kuwo aan dhib lahayn oo ugu dambeyntii bedelaan steroids oo dhan. Taas waxaa la yiraahdaa, (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ma bartilmaameedsanayaan wax kasta oo astrolojiin ah ee jirka bini'aadamka, sidaa daraadeed ma aha SARM. Si fudud loo dhigo, way ka fiican tahay a SARM, waxayna ku jirtaa fasal dhamaystiran oo ay leedahay.
MK-677 waa qayb afka ah oo firfircoon, bayoolaji la heli karo oo saameyn ku leh asal ahaan inkasta oo gebi ahaanba aan laga sooci karin Kobaca Hormone Sii-deynta Peptide (GHRP-6). Tan waxaa badanaa loo yaqaan ghrelin hormone hormoonka gaajada? Heerarka 'Ghrelin' runti way soo kordhayaan cuntada ka hor, iyo saameynta ghrelin iyo MK-677 waxay kugu dhacaan inaad waxyar dareento gaajo. Tani waa si khaldan hase yeeshee, ficilkooduna wuxuu bartilmaameedsanayaa gobollo badan oo maskaxda ah oo muhiim u ah ka-qaybgalka dheef-shiid kiimikaadka. Marka, sida aghiste ghrelin ah (ama GHRP-6), MK-677 waxay dhaqaajisaa soo-dhoweeyeyaasha u diyaariya jirka inay nafaqeeyaan, koraan, dayactiraan, oo firfircoonadaan. Sidoo kale keenaya koror ballaaran heerarka hoormoonka koritaanka.
Hormar kobcinta waa ilbaxnimada dunida ee dhabta ah. Waxay kaa dhigeysaa mid xoogan, mid fudud, caafimaad leh, wuxuu hagaajiyaa maqaarka iyo timaha, iyo laga yaabo inay xitaa xitaa dareen badan. Inkasta oo, hormoonka koritaanka aan loo baran sida koritaanka garashada ee dadka waaweyn ee caafimaad qaba, waa caadi ahaan inta ugu badan inta lagu jiro mudada nolosha oo leh heerka ugu sarreeya ee garashada garashada; Xitaa ka sii muhiimsan waxaa la ogaaday in la wanaajiyo garashada dadka qaba cudurka Alzheimers. Hormarka kobaca ayaa ah shaki ku jira hoormoonka aasaasiga ah ee horumarinta jir ahaaneed, siinta calaamadaha muruqyadeena si ay u koraan oo u badiyaan; abuurista unugyo muruq badan si ay u weynaadaan una xoojiyaan.
Koritaanka murqaha iyo dufanka oo lumiya ayaa ah ujeedada ugu weyn ee dadka intooda badan xiiseynayaan MK-677. Maqaarka iyo timaha wanaagsan hubaal ma dhaawici karaan sidoo kale, laakiin xaqiiqda dhabta ah ee halkan ka jirtaa waxay tahay in MK-677 uu yahay hormoon koritaan xoog leh oo sii deynaya xarunta. Waxay leedahay 24 saac badhkeed, taas oo ka dhigaysa mid firfircoon muddo dheer, oo ka duwan inta badan hormoonka koritaanka ee sii deynaya xeryahooda MK-677 ma kordhiyo heerarka cortisol.
Ibutamoren wuxuu ka mid yahay SARMS ugu awoodda badan oo faa'iido leh ee suuqa. Kuwa aan aqoon u lahayn ereyga, SARMs waa kuwa xakameynaya xargaha iyo xulashada. Daawooyinkaasi waxay awoodaan inay ku lug yeeshaan kaliya xayiraadaha werogen ee muruqyada. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u faa'iido badan iyo xaaladaha qaarkood si ka wanaagsan sida steroids, sababtoo ah steroids waxay ku lug yeeshaan soo-qabsashada xeryaha iyo lafaha, maqaarka iyo xubnaha gudaha. Tani waxay keeni kartaa waxyeelo kala duwan, halka SARMs sida caadiga ah loo isticmaali karo iyada oo aan la kulmin waxyeellooyin soo raaca. Xulashada Tani waxay ka dhigaysaa midabtakoorka isudheellitirka ee xajmiga iyo xajmiga 10: 1, halka saamiga istaandarada lagu duri karo testosterone waa 1: 1. Sababtoo ah SARMs waxay awoodaan inay soo saaraan fal-celin anabolic oo wanaagsan iyadoon wax-ka-beddelka raad-raaca ah sida ginecomastia, muruqyada, cadaadiska dhiigga sareeya iwm.
Dadka ku turjumaya SARM-yada, sida Ostarin, LGD 4033 ama Ligandrol, ama YK11, guud ahaan waa shaki, maxaa yeelay waxay umuuqataa mid wanaagsan inay runtahay. Waa hagaag, way fududahay in la tijaabiyo oo la arko naftaada, ama ka hubi goobaha ay ku jirto markhaatiyo aan tiro lahayn oo qiraya waxtarkooda Dhibaatada kaliya ayaa ah in SARMs aysan u awood badneyn sida caadiga ah steroids dhiska. Haddii aad raadineyso inaad noqoto xayawaan baaxad leh, markaa macnaheedu waa inaad qaadatid steroids ugu awoodda badan sida Anadrol 50, Dianabol, Deca Durabolin, Trenbolone, iwm. Kuwani waxay kuu noqon doonaan hal dabeecad weyn. Laakiin SARM waa xulashada ugu fiican ee kuwa raadinaya inay helaan tayo sarre leh, iskuul ku tiirsan habka caadiga ah. Hal qof ayaa filan kara in uu helo xaddiga 10-15 ee murqaha caatada ah ee ku jira xaalad hal wareeg ah (badiyaa 4-5). Ma aha in la sheego faa'iidooyinka la jarayo, kuwaas oo mararka qaarkood xitaa aad u fiican.
Tani waxay ahayd hordhac yaryar si aad u fahamto nooca Ibutamoren. Laakiin xaruntan ayaa si gaar ah udub dhexaad ah waxayna ka taagan tahay SARM-ga caadiga ah ee habka aadka u xiisaha leh.
Isticmaalka MK-677 waa mid aad u fudud oo fudud, maxaa yeelay waa kaabis afka ah mana jiraan wax maamuusyo murugsan oo ku lug leh. Waa la qaadan karaa muddo dheer, illaa 10 toddobaad. Qiyaasta dhexdhexaadka ah ee maalinlaha ah waa 25 mg. Qaar ka mid ah wiishyahanada khibrada leh waxay isticmaalaan qiyaaso 50 mg ah iyo wixii ka sareeya. Tani si kastaba ha noqotee, maahan lagama maarmaan haddii aad isticmaaleysid kabitaanka markii ugu horeysay. Isku hagaajinta qiyaasta inta lagu jiro wareegga sidoo kale waa la oggol yahay. Haddii aad dareento in qiyaasta aad hadda qaadanaysid aysan ku filneyn inay soo saarto natiijooyinka aad filayso, waad yareyn kartaa xoogaa oo waad arki kartaa inay saameyn xooggan leedahay. Taas bedelkeed, laga yaabee inaad ku heli karto natiijooyin isku mid ah adoo qaadanaya qadar yar. Qof kastaa wuu ka duwan yahay, laakiin qiyaasta caadiga ah ee 25 mg maalin kasta waxay qabataa shaqo wanaagsan inta badan isticmaaleyaasha.
Haddii aad eegto agagaarka jirdhiska, waxaad arki doontaa in dad badan ay ku guuleysteen inay isku daraan Ibutamoren, Candarine iyo Andarine. Wadajir loo isticmaalo, alaabooyinkan waxay sameeyaan xargo goyn weyn. Qalabka jarjaridda ee xooggan ee saddexda nooc ee la isku daro ee la isku daro waxay noqon doonaan toddobaadyo XNUM. Waxaad u baahan doontaa inaad qaadato mg maalintii 10 oo Ibutamoren ah, mg mg 25 Kaararin iyo mgmaanka 25 ee Andarine. Tani waa wareeg ah dadka isticmaala heer sare, laakiin waa ku filan inay soo saarto tartan qiimo leh oo ku habboon, quudhsan iyo kali.
6.Waa maxay Qiyaasta Qaadashada?
Qiyaasta MK-677 Lagu Sameeyay: 25 mgs-50 mgs
Qaar ka mid ah baaritaanka MK-677 ayaa muujinaya qiyaasta MK-677 ee la soo jeediyey in ay tahay 25 mgs-50 mgs marka ay tahay afka.
Maamulka MK-677 25 mg waxay dhalisay 60.1% koror ah heerarka serum IGF-1 ee usbuucyada 6 iyo kordhinta 72.9% ee bilaha 12. Moodooyinka isku-dhafan ee isku dhafan oo ay ku jiraan daaweynta, waqtiga (bisha), kala-soocidda kala-soocidda (aasaasiga MMSE dhibcaha vs20 vs> 20), iyo isdhexgalka daaweynta-waqti-ka, ma jirin farqi weyn oo u dhexeeya kooxaha daaweynta ee CIBIC-plus ama celceliska isbeddelka dhibcaha aasaasiga ah ee dhibcaha ADAS-Cog, ADCS-ADL, ama dhibcaha CDR-sob in ka badan 12 bilood.
Qadarka caadiga ah ee la isticmaalo ee maalin walba la isticmaalo ayaa lagu talinayaa in la bixiyo faa'iidada ugu sarreysa ee saameynta ugu yareeya waa 25 mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, waxaad ogaan doontaa in alaabta la iibiyey ay ka mid tahay budo ama dareere ah oo ka bilaabmaysa xajinta 5 illaa 1000 mg ama ka badan. Iyada oo foomka budada ah ee adag, waxaad u kala qaybin kartaa qiyaastaada si taxadar leh oo aad ugu jajabiso xaddiga xaddiga 25 ee maalinlaha ah. Tani waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad lacag ku badbaadiso alaabooyinka kale ee ku jira qaabka kiniiniga, ay qaali yihiin, oo aanad si fudud ugu jajabinin qiyaasta qiyaasta si sahlan.
Qaadashada qiyaastaada hal mar maalintii way fiicantahay illaa badhka nolosha Mk 677 Ibutamoren waa saacadaha 24. Dad badan ayaa kugula talinaya in aad qaadato qiyaastaada inta aanad sariirta aadin sababta oo ah hormoonka kobcinta hormoonka hore waxay awood u leedahay in ay dadka qaar dareemaan daal. Tani waxay badanaa tahay saameyn caam ah oo hormoon kobcin tayo sare leh taas oo ah sababta loogu taliyay in aad qaadato qiyaastaada ka hor wakhtiga hurdada si aanad dareemeynin inaadan dareemeyn murugo markaad kacsan tahay.
Waa gebi ahaanba ilaa iyo inta aad rabto inaad qorsheyso mudada wareeggaaga. Shakhsiyaadka qaarkood ayaa internetka u soo gudbiyay in ay qaateen wax kabadan sanad ama in ka badan oo aysan muujin wax calaamado ah. Natiijo ahaan, ma jirto sabab loo yareeyo dhererka wareegga wareegga ah ee la isku haleyn karo oo aad ku ordi karto Mk 677 Ibutamoren illaa iyo intaad rabto adoon walbahaarin inaad ka welwesho dabiiciga GH dabiiciga ah ama jeexanaanta qanjidhada 'pituitary'. Kuwa kuwa taxaddar leh, waxaad dhigi kartaa dhererka wareeggaaga illaa todobaadyada XNUM laakiin waxaa dhab ahaan loo isticmaali karaa mudo dheer. Dad badani marnaba ma soo baxaan sababtoo ah waxay jecel yihiin badeecada wax badan.
7.Waxay tahay sababta loogu talagalay Jimicsiga?
Jir-dhiseyaasha ayaa had iyo jeer raadinaya badeecada ugu fiican ee soo socota oo ka caawin karta inay helaan murqo badan oo hagaajiyaan waxqabadkooda. Waxaa jira kumanaan alaabood oo ay ku jiraan dhammaan sheegashooyinka inay bixiyaan nooc ka mid ah lacagta. Si kastaba ha noqotee, waxyeellooyinka soo noqnoqonaya ee badan oo ka mid ah alaabooyinkaasi waa waxa dadka intooda badani rabaan inay iska ilaaliyaan Dhibaatooyinka caadiga ah iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaadka la xiriira alaabooyinkaas waxaa badanaa ka mid ah:
- Korodhka miisaanka oo kordhay
- Muuqaal sifo ah
- Cadaadis dhiig oo sarreeya
- Dad badan oo kale
Tani waa halka Mk 677 Ibutamoren uu ciyaarayo sababtoo ah waxaa si cilmi ah loo darsaday loona baayacmushtey marar badan. Daraasado badan iyo baaritaano badan, natiijooyinka ayaa muujiyay in Mk 677 loo xaqiijiyay inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee lagu helo jirka dhismaha; iyo sidoo kale hawlaha kale ee ku lug leh tababarka xoogan.
Mk 677 Ibutamoren ayaa sidoo kale ugu fiican dharka jirka sababtoo ah ma saameyn doonto adiga testosterone heer kasta oo awood u leh dhammaan hab-raac xun. Ka dib qaadashada kabitaankan, ma jirto baahi loo qabo in la dhameeyo marxaladda PCT ama qaadato aromatase inhibitor kaas oo looga baahan yahay alaabta kale.
Intaas waxaa sii dheer, markaad qaadatid qadar afka ah, waxaad isla markaaba kordhin doontaa sii deynta hoormoonka koritaanka iyo IGF-1 kaas oo laga sii daayo qanjirka 'pituitary gland' iyadoo loo sii marinayo garaaca xoog leh ee GH 24 saac ee soo socda. Qulqulkaan adag waxay u sababaan jirkaaga inuu abuuro hormoon koritaanka sii deynaya peptides si dabiici ah loo sii daayo halkii daaweyn badan bodybuilders ay u isticmaali lahaayeen inay isticmaalaan cirbado badan oo hoormoonka koritaanka ah-sii deynta peptides. Marka loo eego Mk 677 Ibutamoren, waxaa loo qaataa afka oo dhammaan isku-buuqa hormoonnada koritaanka ee 24-ka saacadood ee soo socda ayaa laga sii daayaa hal mar oo keliya.
Iyada oo heerkan sarreeya ee bioavailability afka, uma baahna wax cirbad ah oo kaliya hal qiyaas ayaa loo baahan yahay si loo helo dhammaan faa'iidooyinka. Ka hor inta, jidh-dhisayaasha waxay isticmaalaan tallaalka HGH iyo cirridka GH-ka ee looga baahan yahay inay qaataan qiyaaso dhowr jeer maalintii. Waxaad qiyaasi kartaa sida raaxo daradu tahay marka lagu daro dhibaatada markaad u safraysid tan iyo HGH iyo peptides waxay u baahan yihiin kaydinta qaboojiyaha xitaa markaad safraysid.
Ka dib marka laqaado, waxay kicisaa qanjirka 'pituitary' taasoo keenta xNUMX xoog leh oo GH ah. Si aad u hesho faa'iido isku mid ah peptides, waa inaad joojisid GHRP-12 ugu yaraan saacadaha 6 ama in ka badan maalintii si loo gaaro faa'iido isku mid ah. Intaas waxaa dheer, kabitaankani waxaa lagu kaydiyaa heerkulka qolka kaas oo fududeynaya safarka.
Maalin kasta oo isku xigta isticmaalka, heerarka dheecaanka hoormoonka ayaa sii wadi doona inuu u sii socdo heerar sii kordhaya oo sii kordhaya. Markay taasi dhacdo, heerarkan sare waxay u oggolaan doonaan jirkaaga inuu go'aamiyo inta muruq ee aad awood u yeelan doonto inaad xirato. Intaas waxaa sii dheer, kororka miisaanka ayaa ah mid deg deg ah oo aad looga dareemi karo hab wanaagsan dufanka jidhkuna si fudud ayuu uga dhalaalaa sidii hore. Maaha wax aan caadi ahayn qof qaadanaya inuu koro ilaa 10 rodol usbuuca ugu horreeya ee uu isticmaalayo kaabista.
Dhaliye ahaan, tayada hurdadu waa mid muhiim u ah sida jadwalkaaga shaqada ee dayactirka iyo dib u soo kabashada. Waxaa la xaqiijiyay in ay bixiso tayada hurdiga ah ee fiican oo si qoto dheer leh loo hagaajiyay iyada oo ay sabab u tahay kordhinta hormoonka koritaanka. Ma aha oo kaliya inaad dareentid xoog badan inta lagu jiro jadwalka tababarka, lakiin sidoo kale waxaad arki doontaa korodh weyn oo ah xoojinta nitrogen. Natiijo ahaan, waxaad arki doontaa horumarka murqaha sida marna horay iyo dulqaadnimadaada ayaa sidoo kale si weyn loo horumarin doonaa. Waxaa sidoo kale jiri doona hagaajin kaadi-galkaaga si ay ugu jiraan maqaarka caafimaadka qaba iyo timaha.
8 (MK-677 budada) Ibutamoren budada Details:
CAS Aqoonsi: 159752-10-0
Xalka: Biyaha, DMSO, Ethanol, Propylene Glycol
Barta Dhalaalka: 170 - 172 ° C
Kaydinta: Sannado 20 ° C 2, yaree hawo qabasho furan, ku kaydi meel qabow oo qalalan
Nolosha badhkeed: Saacadaha 24
Muuqaal-cadaan-cad oo ah budada quruxda leh, hygroscopic, ur urid ah
9.How si aad u qaadato Liquid (MK-677 budada) Ibutamoren budada oo ka mid ah?
Si aad u sameyso xal dareere ah oo ka soo baxa budada cayriin maxaa yeelay taasi waa habka ugu wanaagsan ee si sax ah loogu cabbiro qiyaasaha.
Si aad uhesho xalka 25mg / ml 30ml waxaad u baahan doontaa:
Isku qas dhamaantiis isla markaana kululeey ilaa inta ay ka dhammaato xal.
Waxay u dhadhamin doontaa sida shay oo kale laakiin way fududahay in la isticmaalo.
Si aad u iibsato boomsho quraarad ah isku darka iyo kululaynta iyo dhalada 30ml. Tani tan la samee budada kasta ee SARM laakiin qiyaas inta ay leeg tahay MG aad u baahan tahay iyada oo ku saleysan inta xaddiga mg / ml aad rabto.
10.Genius Iibso MK-677 Powder: ka iibso budada Ibutamoren AASraw
1.To nagula soo xiriir nadaamkayaga habka baaritaanka emailka, ama wakiilka adeegga shabakadda internetka (CSR).
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan alaabooyinka la xiriirasoo dhawow inaad gujiso halkan
Tags: Soo iibso MK-677 budada, Ibutamoren Powder, MK-677 budada
GW 501516 / Cardarine Macluumaadka aasaasiga ah Miisaanka oo hoos udhaca: Nooca miisaanka lumay miisaanka ayaa kugu habboon?